Oniversite Belza Mandray Mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Marsa 2016 4:48 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, Ελληνικά, English
VUB/Faritry ny Oniversite Afaka ao Bruxelles ao Etterbeek Sary: Big Apple/Creative Commons
Ity lahatsoratra nosoratan'i Jeb Sharp ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 7 Martsa 2016, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Raha nifindra tany Belzika i Mohammad Salman mba hanohy ny fianarana Ph.D amin'ny siansa politika tamin'ny 2010, efa nieritreritra ny hiverina an-tanindrazana any Syria izy. Nahazo vatsim-pianarana feno tany amin'ny governemanta Siriana izy mantsy.
Saingy raha nipoaka ny ady. Ary nilatsaka tamin'ny governemanta Siriana ny sazy, lany vetivety ny volan'i Salman. “Tena fotoana ratsy ho ahy izany teo amin'ny ara-bola,” hoy izy. Miresaka momba ny taona 2013 sy 2014. Nisy fotoana, nidina hatrany amin'ny 80 euros (eo amin'ny 90 dolara Amerikana eo) ny kaontiny tany amin'ny banky.
Saingy tsy vonona handao azy ireo mpampianatra tao amin'ny VUB, Oniversite Afaka ao Bruxelles. Nanangona vola tetsy sy eroa izy ireo, ary nanome fampianarana azy sy nandrisika azy mba hamita ny boky asakaroka (mémoire) ao anatin'ny enina ka hatramin'ny sivy volana. Vitany. Ary satria tany Belzika nandritra ny dimy taona izy tamin'ny fotoana nahavitany ny boky, dia afaka nangataka fizakàna zom-pirenena Belza izy ary azony izany
Mohammad Salman Sary: Nampindramin'i Mohammad Salman/VUB
Vonona hamaly soa indray izy ankehitriny. Nokaramaina hanatontosa fandaharana vaovao ao amin'ny VUB izy mba handraisana mpitsoa-ponenana eo anelanelan'ny 100 sy 200. Tsy maintsy manana antontan-taratasy maha-mpialokaloka ry zareo ary tsy maintsy manana fari-pahaizana afaka miditra amin'ny fianarana ambony. Nahazo fangatahana 800 izy hatramin'izao.
“Tena faly aho manohana ity fandaharana ity,” hoy izy. “Mahita ny tenako ao amin'izy ireo tsirairay avy aho.”
Anjaran'i Salman ny manamarina ny diplaoma sy ny antontan-taratasy avy any an-tanindrazana. Ary anjarany ihany koa ny manadihady azy ireo amin'ny haben'ny fisokafan-tsain-dry zareo sy ny halalahan-kevitra ao amin'izy ireo izay amantarana ny Oniversite Afaka.
“Hahatsapa haingana izahay rahasahaza izany na tsia ilay olona”, hoy i Koen Van den Abeele, izay mandrindra ny vondron'asan'ny oniversite misahana ny mpitsoa-ponenana.
Nanatontosa ny fikarohana savaranonando i Van den Abeele ijerena izay karazana fangatahana atao ho an'ny programa ho an'ny fandaharana ary sahirankirana izy vao nahazo lahatahiry avy amin'ny governemanta.
“Misalasala be ry zareo hanome ny lahatahiry satria fampahafantarana amin'ny alalan'ny tafatafa izany, izay karazany tsiambaratelo ihany”, hoy i Van Den Abeele. Saingy nahita olona vonona hanome fampahafantarana anatiny ho azy ihany izy avy eo. Tokony ho 23 isan-jaton'ny olona nangataka fialokalofana any Belzika tamin'ny herintaona no nitatitra fa nianatra izy ireo talohan'ny nandosirana ny firenena niavian'izy ireo.
Gaga i Van den Abeele.
“Olona teo anelanelan'ny 18 sy 25 taona izany,” hoy izy. “Tsy afaka hamela azy ireo hivelona amin'ny andro sisa iainany amin'ny fiahiana ara-tsosialy ianao! Manana hambom-po ry zareo ireo, te-hanao zavatra, te-hahatsapa tena ho ao anatin'ity fiarahamonina ity.”
Tsy ny rehetra no manana ny fomba fiheviny. Eoropa, tahaka an'i Etazonia koa ohatra, dia manana ny fihetsehampo tsy tia mpifindra monina, tsy tia mpialokaloka. Saingy ny firenena tahaka an'i Belzika dia mitady fatratra mpiasa manampahaizana.
“Mahita olona manana diplaoma injeniera izahay,” hoy i Van Den Abeele. “Mahita injenieran'ny maritrano, injenieran'ny asa sivily, mahita injenieran'ny indostria, mpahay matematika, olona manam-pahaizana ambony ara-siantifika izahay. Manan-danja amin'ny toe-draharaha ara-toekarena Belza ireo olona ireo. Amin'izao fotoana izao, maro ny toerana (asa) miatdy injeniera izay nisokatra tao anatin'ny enimbolana farany. Tsy nahita olona anefa izy ireo! “
Ary na dia tsy ilay fanohanan-kevitra ara-toekarena aza, misy ny antony hafa hanabeazana ireo vao tonga, araka ny filazan'i Van davaky Abeele.
Nilaza izy fa tsy nahomby tamin'ny fampidirana ho ao anatin'ny fiarahamonina ny zanaky ny mpifindra monina Afrikanina Tavaratra ao aminy i Belzika, izay nitondra nanany amin'ny fisian'ireo ghettos sy ny fanavakavahana nahazo tsiny ho nanampy tamin'ny famoronana mpampihorohoro.
“Raha tsy te-hamokatra olana tahaka izany indray isika, dia mino aho tsy maintsy mifantoka amin'ny fampidirana ireo olona ireo ho ao anatin'ny fiarahamonina”, hoy i Van den Abeele. “Ary ho antsika, ny fianarana no mbola fomba tsara indrindra hampidirana ny olona ho ao anaty fiarahamonina.”
Azo antoka fa fomba iray hahatonga ny olona hahatsapa tena ho feno fankasitrahana izany. Mankafy sy liana amin'ny tanindrazany, sy amin'ny fireneny vaovao, dia i Belzika i Mohammad Salman, Syriana mpiara-miasa amin'i Van den Abeele. Fantany fa mety ho voatazona tao Syria ihany koa izy tamin'ny fotoana nivakisany. Mety ho tsy maintsy nanao ilay fitetezan-tany mampidi-doza manavatsava an'i Eoropa ihany koa izy. Izay no antony mahatonga azy ho faly loatra mandany ny androny manadihady ireo fangatahana avy amin'ny mpitsoa-ponenana manantena hisoratra anarana ao amin'ny oniversiteny. Manantena izy fa hanao tahaka izany ihany koa ireo oniversite hafa ao Belzika.